HomeWararka Maanta“Film Inaan Daawado Ayaan Ka Jecelahay Daawashada Barca” – Ancelotti
Carlo Ancelotti ayaa meesha ka saaray in uu daawan doono ciyaarta ay Barcelona Sabtida la ciyaarayso Valencia, taas oo uu sheegay in halkii uu ka daawan lahaa uu ka door bidayo in uu tago Sinimoo lagu daawanayo filin.
Barcelona iyo Valencia ayay ciyaartoodu soo dhici doontaa fiidka hore, waxaana afar saacadood kadib ay Real Madrid qaabili doontaa Malaga, waxaana Ancelotti oo ay warbaahintu weydiisay in uu daawan doono ciyaartaas iyo in kale uu kula kaftay weriyihii su’aasha weydiiyey in uu ka jeclaan lahaa in uu film iska daawado.
“Waxa aan tegayaa Sinimooga intii aan daawan lahaa Barcelona.” Sidaas ayuu yidhi Ancelotti.
Macallinkan aamusan ayaa waxa kale oo uu sheegay in kooxdiisu ay ku jiri doonto is diyaarin wakhtiga ay Barcelona ciyaarayso, isla markaana aanay heli doonin fursad ay ku daawadaan kulankaas.
Ancelotti ayaa waxa ka maqnaan doona ciyaartaas weeraryahanka Karim Benzema oo jilibka ka dhaawacmay Jimcihii isagoo tababarka la samaynaya kooxdiisa, laakiin waxa uu Ancelotti xaqiijiyey in uu soo noqon doono ciyaarta Champions League ee ay Atletico Madrid la ciyaari doonaan.
Rooney Oo Noqday Sakhraan Weyn